Nepal Mamila | नेपाली काँग्रेसमा वैज्ञानिक सङ्गठनको निर्माण र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने एजेण्डासहित सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हुँ :युवराज न्यौपाने - Nepal Mamila नेपाली काँग्रेसमा वैज्ञानिक सङ्गठनको निर्माण र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने एजेण्डासहित सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हुँ :युवराज न्यौपाने - Nepal Mamila
नेपाली काँग्रेसमा वैज्ञानिक सङ्गठनको निर्माण र देशलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने एजेण्डासहित सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको हुँ :युवराज न्यौपाने
युवराज न्यौपाने नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवशन अन्तर्गतको युवा केन्द्रीय सभापतिका उम्मेदवार हुन् । फरक एजेण्डा लिएर उम्मेदवारी घोषणा गरेका न्यौपाने नेपाली काँग्रेसको १५ वर्ष पुरानो क्रियाशील सदस्य हुन् । उनीसँग कुनैपनि कार्यकारी पदमा बसेर काम गरेको अनुभव नभएतापनि विद्यार्थी राजनीतिमा भने सक्रिय थिए । एम ए, बिएल र बिएडसम्म अध्ययन गरेका न्यौपानै पेशाले व्यावसायी हुन् । व्यावसायकै सिलसिलामा चीनमा रहँदा उनले नेपाली काँग्रेसको भातृ सङ्गठन जनसम्पर्क समितिको महामन्त्रीको रुपमा रहेर काम गरेका थिए । अहिले न्यौपानेको उम्मेदवारीले नेपाली काँग्रेसमा एक किसिमको तरंग पैदा गरेको छ । उनिसँग नेपाल मामिलाका लागि सीता तुम्खेवाले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवारी दिने आँट गर्नुभयो, पार्टीको साथ सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
सहयोग पाउछु पाउदिनँ भन्दा पनि मैले समाजमा एक किसिमको सन्देश दिने प्रयास गरेको हुँ । २०४६ सालको परिवर्तन पछिको करिब ३०/३५ वर्षको अन्तरालमा नेपाली काँग्रेस पार्टीमा मात्र नभई हरेक पार्टीमा एउटै व्यक्तिद्धारा शासन गरिरहँदा आम नागरिक, आम मतदाहरूको असन्तुष्टि भइरहेको अवस्थामा मैले नेपाली काँग्रेसको उम्मेदवारी दिएर अब नयाँ युवा पुस्ताहरू देश बनाउने समृद्धिको रोडम्याप लिएर अगाडि आउन सक्षम छन्, समृद्धिको क्रन्तिलाई पुरा गर्ने हामी युवा नेतृत्व तयार छौं भन्ने सन्देश दिने प्रयास गरेको हुँ । चुनावमा कस्ले सहयोग गर्छ गर्दैन ? भन्दा पनि मैले जे दिन खोजिरहेको छु, त्यो दिने कुरामा चाहिँ म अगाडि बढिरहेको छु । यसमा मलाई सफलता पनि मिलिरहेको छ ।
प्रभावकारी भइरहेको छ जस्तो लाग्दैछ त ?
प्रभावकारी नै भइरहेको छ । सामाजिक संजालहरूमा तपाइँहरूले पनि देखिरहनुभएको छ । आम नागरिकहरूले अपेक्षा राख्नुभएको छ । जुन किसिमको प्रेरणा दिनुभएको छ, त्यसले मेरो मनोवल उच्च बनाइरहेको छ । यसपटक नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिएला नसकिएला ! चुनावको मत परिणाममा जितिएला नजितिएला ! त्यो फरक पाटो हो । तर जे सन्देश दिन खोजिरहेको थिएँ, त्यसमा म प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढिरहेको छु ।
विशेषगरी युवाहरूले चर्चाका लागि फण्डा मच्चाउने गर्छन्, तपाईको पनि फन्डा नै त होइन ?
म जनताको मुद्धा लिएर अगाडि बढेको मान्छे हुँ, चर्चासँग कुनै सरोकार छैन । नेपाल समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपाली युवायुवतीहरूले यहिँ रोजगारी पाउनुपर्छ । नेपालमै आफ्नो सपना पुरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा लिएर उम्मेदवारी दिएको हुँ । अब मान्छेका आधारभूत आवश्यकताहरू बढेका छन् । गाँस, वास, कपासबाहेक एउटा सवारी साधन पनि आधारभुत आवश्यकतामा परिसकेको समाजमा हामीले आम नेपालीहरूको चाहानालाई नेपालमै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष लिएर हिँडेको हुँ । त्यहि लक्ष पुरा गर्नका लागि र आम नेपाली युवाहरूको सपना पुरा गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको हुँ । मलाई चर्चासँग कुनै सरोकार छैन । मुख्य सरोकार एजेण्डासँग छ । पार्टीभित्रका केहि साङ्गठनिक विषयवस्तुुका एजेण्डाहरू पनि उठाएको छु । किनकी सङ्गठनलाई सुधार गर्न सकियो भने, केहि ढाँचाहरूलाई बैज्ञानिक बनाउन सकियो भने नेतृत्व परिवर्तनमा धेरै कसरत गरिरहनु पर्दैन । सङ्गठनको प्रक्रियाले नै त्यसलाई परिवर्तन गर्छ । यी महत्वपूर्ण मुद्धाहरूलाई मैले उठाइरहेको छु । त्यसैले मैले देश, जनता, आम नागरिक, पार्टीको साङ्गठनिक विषयका कारण दिएको उम्मेदवारीलाई चर्चासँग नजोडिदिनुहोला ।
पार्टीको साङ्गठनिक कुरा गरिरहँदा तपाइँको नजरमा काँग्रेसभित्र रहेको जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्ने खालको विकृति या खराब पक्ष छन् ? त्यसमा आफ्नो भिजन बताइदिनोस् न ?
जरैदेखि उखेलेर फाल्नुपर्नेभन्दा पनि मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हामी जुन समाज र राजनैतिक संस्कारबाट आएका छौं, त्यहिँबाट कार्यकर्ताको मनोविज्ञान पनि पे्ररित छ । ठूला मान्छेको अगाडि हत्तपत्त बोल्नु हुँदैन, राम्रो कुरा पनि अड्कलेर बोल्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कार या मनोविज्ञान छ । त्यो संस्कारबाट हुर्केर आएको मान्छेलाई मैले उम्मेदवारी दिँदा शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल जस्ता सिनियरहरूलाई चुनौती दिने ? भन्ने प्रश्न आउछ । हो, मैले यहि मनोविज्ञानलाई फेर्नु छ । हाम्रो पार्टीको प्रशिक्षण पद्धति र साङ्गठनिक ढाँचा खराब छ । जस्तैः प्रशिक्षकले त कार्यकर्तालाई मोटिभेशन गर्ने, मनोविज्ञान परिवर्तन गर्ने हो । पार्टीले कस्तो खालको कार्यकर्ता निर्माण गर्ने भन्ने मोटिभेशनल स्पिकरहरू छैनन् । हामी प्रशिक्षक नियुक्त गर्छौं तर प्रशिक्षक नै समाजका कतिपय कुरामा अनविज्ञ छ । आफैले नजानेको विषयवस्तुुलाई लिएर प्रशिक्षण दिन्छौं । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौं तर लोकतान्त्रिक चरित्र अनुसार चलाउन सकेका छैनौं । कतिपय क्रियाकलापहरू वास्तविक लोकतन्त्रका आधरभुत मूल्य मान्यताभन्दा फरक छन् । त्यो पाटोलाई हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सभापति चुन्ने प्रक्रिया सिमित ४५ सय जनालाई छ । वडाबाट आएका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू छन् । सबै नेपालभरका वडाका प्रतिनिधिहरूले भोट हाल्न पाउनुपर्ने व्यावस्था हुनुपर्छ । तबमात्र एउटा मासको लिडर छान्न सक्छौं । क्षत्रीय प्रधिनिधिबाट नै केन्द्रीय नेतृत्व चयन हुनुपर्छ भन्ने व्यावस्था हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । नेपाली काँग्रेसमा २ खाले सदस्य बनाइन्छ । एउटा साधारण सदस्य र अर्को क्रियाशिल सदस्य । मेरा धारणा यी दुवै प्रणलीका सदस्यतालाई अन्त्य गरी एउटै राख्ने हो । पार्टीमा साधारण र क्रियाशिल सदस्य भन्ने हुँदैन । १५ वर्ष क्रियाशिल सदस्य भएपछि मात्रै नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा म उम्मेदवार हुन पाउछु । यस्ता समय सिमाहरू राख्न पाइदैन । योग्य मान्छे आज आएर भोली पनि पार्टी सभापति हुन पाउने नियमहरू राख्नुपर्छ । योग्य मान्छेलाई समय सिमा र छेकबार राख्नुहुँदैन । समाजले पत्याएको, विस्वास गरेको र समाजलाई गति दिन सक्ने मान्छेलाई सिमा राखेर नेतृत्वमा पुग्नबाट बञ्चित गर्र्नु पार्टीको आधारभुत मान्यता हैन । यी यावत कुराहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर मैले कुरा उठाएको छु । जरैबाट उखाल्नुपर्ने भन्ने कुरा केहि छैन । विपी कोइरालाले निर्माण गरेको पार्टी हो । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध छौं । नेपाली काँग्रेस २००७ सालमा क्रान्ति गरेर नेपाली समाजमा लोकतन्त्र र जनताको अधिकारमा बत्ती बाल्ने काम गर्ने पार्टी हो । भोली पनि नेपाली जनाताका आशा र भरोषाको केन्द्र हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबले आफ्नो उम्मेदवारी दिएको छु र त्यहि हिसावले अगाडि बढेको छु ।
सबैले वीपीको सिद्धान्त भन्छन्, तपाइँ विपीपछि मेरै सिद्धान्त लागु हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, खासमा विपिको सिद्धान्त भनेको चाही के हो ?
आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा भन्दा विपीले सामन्ती जहानियाँ राणा शासनको अवस्थामा जनताको अधिकारको कुरा र जनाताले आफ्नो नेता र नेतृत्व छान्न पाउने व्यावस्थाको वकालत गरिरहनुभएको थियो । मुख्य रुपमा वहाँको सिद्धान्त लोकतन्त्र नै हो । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद भनेर वहाँले भन्नुभएको छ । यसको व्याख्या गर्दा धेरै लामो हुन आउछ । मेरो सिद्धान्त चाहिँ विपीले जहानियाँ राणा शासनको पालामा प्रवासमा बसेर निर्माण गर्नुभएको सङ्गठनलाई नै आज पनि कायम राख्ने हैन । अब समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यो प्रवासमा बसेर बनाएको सङ्गठनको ढाँचालाई फेर्नुपर्छ । त्यसमा पनि केहि साङ्गठनिक कमजोरीहरू छन् । ३÷४ वटा मुद्धाहरू आजसम्म कसैले उठाएनन् । त्यसको पहिलो मुद्धा उठाउने पात्र म हुन्छु । विपी पछाडी पहिलोपटक वैज्ञानिक ढंगले पार्टी चलाउने सन्दर्भमा मुद्धाहरू उठाउने मान्छे म हो भनेर मैले मेरो सिद्धान्त लागु हुन्छ भनेको हुँ ।
सिद्धान्त र सङ्गठनको ढाँचा परिवर्तन गर्न सम्भव छ त ?
सिद्धान्त त एउटैमा छौं । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादमा आधारित रहेर इकोनोमिक्स मोडलमा खुल्ला बजार व्यावस्थापन गरेर राज्यले लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा जाने हो । तर सङ्गठनको ढाँचाको प्रसंगमा चाहिँ संसारमा धेरै वैज्ञानिक मोडलको साङ्गठनिक परिवर्तन भएको देखेका छौं । हामीले पनि जति सक्दो आम नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने खालको सङ्गठनको ढाँचा बनाउनुपर्छ । जुनबेला मान्छेले राजनीति गर्दा जागीर खान पाउदैन थिए, पक्राउ पर्दथे । त्यसबेला बनाएको ढाँचा अब त फेर्नुप¥यो नि ! अहिलेको परिवेश त अलग भइसकेको छ । अहिले मान्छे आफ्नो काम गरेर राजनीति गर्न पाउछ । हो यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले उठाएको छु । विपी पछाडी कति पुस्ता सकिए तर यी कुराहरू उठेनन् । यो कुरा उठाउने म नै पहिलो पात्र हो ।
तपाइको उम्मेदवारीको उदेश्य सहि होलान् तर अहिले जजसले काँग्रेस सभापतिका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, वहाँहरुको तुलनामा तपाईको उम्मेदवारी हात्तिको मुखमा जिरा हुने त हैन ?
लडाइँ एजेन्डाले लड्ने हो । जनताको मुद्धा उठाउने क्रममा, देशलाई समृद्ध बनाउने योजना जोसँग छ त्यसैले नेतृत्व लिने हो । मान्छेलाई हेरेर शरीर र उमेर जेठो भएको आधारमा, पटकपटक पार्टीको जिम्मेवारी लिएको आधारमा कोइ मान्छे हात्ती हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ । उनिहरूले पदमा बसेर गर्न नसकेका असक्षताका कुराहरूलाई मैले उठाइरहेको छु । त्यसैले वहाँहरू जेठो हुनुको कारणले, लामो समय पटकपटक लाभको पदमा बसेका आधारमा वहाँहरू हात्ती भन्ने कुरा आउदैन । मुद्धा र सिद्धान्त र काम गर्ने इच्छाशक्तिको आधारमा मेरो अगाडि वहाँहरू चै जिरा हो । तर अब समय र परिवेश कस्तो हुन्छ ? नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताहरूको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन बाँकी छ ।
काँग्रेसमा युवाहरूले जति नै युवाको नेतृत्व भनेता पनि अन्तिममा आएर वृद्धकहाँ नै पुग्ने गर्छ, यसपटक पनि त्यस्तो हुन्न र ?
हुन सक्छ । तर चुनावी मैदानमा जाने, चुनाव लड्ने र प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । म वहाँहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छु । फेरी कुरा युवा र बुढाको पनि हैन । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेलहरू बुढो भए भन्दैमा हट्नु भनेको हैन । वहाँहरू टेस्टेड भइसक्नुभएको कारण बाहिर निस्किनोस् भनेको हो । यदि वहाँहरू टेस्ट नभएका बृद्धाहरू हुनुभएको भए मेरो पनि हार्दिकताका साथ स्वागत हुने थियो । तर वहाँहरू पटकपटक परीक्षण भएर असफल भइसकेकाहरूसँग फेरी आशा राख्नु भनेको हाम्रो मनोविज्ञान गलत हुनु हो । त्यसैले युवा र बृद्धा भन्दा पनि परीक्षण भइसकेकाहरूको विरुद्धमा छु । शेरबहादुर देउवा ५ पटक परीक्षण भइसक्नुभयो, अब हामीले केका लागि सभापति बनाउने ? वहाँसँग हाम्रो के आशा बाँकी रह्यो ? वहाँको कार्यक्षमता यो ५ पटकमा हामीले बेहोरिसक्यौँ त ! त्यसैले मसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि परीक्षण नभएकाहरू आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । मैले शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र जीलाई आग्रह गरेको छुु, ‘तपाई दुईजनाको पटकपटक परीक्षण भइसक्यो । लाभको सत्तामा पनि बस्नुभयो, पार्टीको सत्तामा बस्नुभएको ३५ वर्ष भयो । तपाइहरूको क्षमता, दिमाग सबै कुराहरू यो देश र पार्टीको लागि प्रयोग गरिसक्नुभयो । अब तपाइहरूले आफू मनोनयन नहाली अन्य विकल्पको सम्भावना खोज्ने हो भने म मेरो मनोनयन पनि फिर्ता लिन्छु’ भनेको छ ।
कति युवाहरू छन्, युवाको नेतृत्वमा पार्टी चाहने ?
वाहिर सर्भेमा हेर्दा सबैले युवा भन्छन् । सबैले युवा नेतृत्वको आवश्यकताको महसुस गरेको पाइन्छ । तर, अब परिणाम नै पर्खिनुपर्ला । अहिले जिल्लाबाट निर्वाचन भएका अधिकांस साथिहरू पार्टीमा नयाँ अनुहारहरू देखिनुहुन्छ । जे होस् भोलिको परिणाम पक्कै सुखद रहन्छ होला ।
अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएको, तपाइले राख्नैपर्ने आफ्ना कुराहरू छन् ?
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय सभापतिमा उम्मेदवार दिने मेरो कुरालाई पत्रकार साथिहरू र मिडियाहरूले एउटा उच्च ढंगबाट आवाज उठाइदिनुहुन आग्रह छ । यो नेपाली काँग्रेसको मात्र नभइ सारा नेपाल र नेपालीकै कुरा भएको हुँदा यस विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिइदिनुहुन अनुरोध छ । यसलाई चर्चाको लागि मात्रै र जिस्काउने काम मात्रै हो भन्ने हल्का तरिकाले लिएर यो मुद्धाको आधारमा बसैभन्दा बलियो उम्मेदवार युवराज न्यौपाने हो भन्ने नजरबाट हेरिदिन आग्रह छ । यो एउटा महा अभियान हो, यसमा मिडियाहरू पनि जोडिनुपर्छ ।
पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एक भएर लाग्न प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह
काँग्रेस जस्तो समावेशी पार्टी अरु कुनै नभएको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी
काँग्रेसकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय एकता अझै बलियो बनाउछौं: देउवा